Istaraatiijiyadda Daryeelka? | Martech Zone
Isniintii, September 26, 2005 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Waxaan ku sugnaa kaniisadda dhammaadka wiigga waxaanan maqlay xigasho cajiib ah:
Dadku ma daryeelka meeqa ogaan ilaa ay ogaan meeqa daryeelka!
Taasi waxay tiri, su'aashu waxay si toos ah ula xiriirtaa dadaalka suuqgeyntaada. Waxaan had iyo jeer ka hadalnaa Xayeysiinta & Suuqgeynta istiraatiijiyaddan isku dhafan. Runti miyaanay ahayn in "Daryeelitaankeennu" ay muhiimad weyn leedahay? Malahayga ayaa ah in Daryeelka uu muhiim u yahay sida Istaraatiijiyad kasta oo Xayeysiin ah, Istaraatiijiyad Suuqeyn, Cilmi baaris iyo Horumar, ama xitaa wax soo saarkaaga dhabta ah.
Waa maxay Istaraatiijiyadda “Daryeelka” shirkaddaadu?
Tags: daryeelkaistaraatijiyad daryeeldaryeelka macaamiishaistaraatiijiyada macaamiisha